रोजगारको अवसर नभेटेपछि गाउँका युवाहरु भारततीर, गाउँ बन्न थाल्यो सुनशान| Nepal Pati
रोजगारको अवसर नभेटेपछि गाउँका युवाहरु भारततीर, गाउँ बन्न थाल्यो सुनशान
बाजुरा । जिल्लाका अधिकांस युवाहरु यतिबेला रोजगार खोज्न भारत तर्फ लम्केका छन् । गाउँमा कुनै पनि किसिमको रोजगारीको सृजना नभएपछि उनीहरु रोजगार खोज्न भारत तर्फ लागेका हुन् ।
गाउँमा खाउँ भने मानो छैन्, भएका खेतहरुमा खडेरी लागेको छ, खेतमा वर्षेनी बाली लगाउनलाई सिचाई सुविधा छैन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भन्छन हामीहरुलाई थाहा छैन् । परिवारहरुलाई पाल्नको लागी छिमेकी मुलक भारतिर रोजगारका लागि जानुको विकल्प नरहेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका १ का धनबहादुर विकले गुनासो पोखे । दशै तिहार नजिकिए पछि करिब डेढ महिना अघि पारिवारिक भेटघाट र दशै तिहार मनाउन भारतबाट रोजगारी गरेर गाउँ फर्केका जिल्लाका अधिकाँस युवाहरु अहिले दिन प्रतिदिन जिल्लाबाट बाहिरिन थालेका छन् । युवाहरु रोजगारीको सिलसिलामा घरपरिवार छोडेर अन्य मुलकुमा गएपछि अहिले स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको वडा नं. १ को पुरै गाउँ सुनसान जस्तै बनेको छ ।
गाउँमा पढेलेखेका युवाहरु धेरै छन् । युवाहरुले पढाई सकेर सर्टिफिकेटहरु बाकसमा बन्दी राखेर काम खोज्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था आएको मुक्तीकोट गाउँका लालबहादुर विकले दुखेसो पोखे । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नं. १ मुक्तीकोटको पुरै दलित परिवारका युवाहरु रोजगारी खोज्न भारतीर लागेका छन् । गाउँमा करिब ३ सय बढी दलित परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । गाउँबाट पुरै युवाहरु रोजगार खोज्न भारततिर लागेपछि अहिले गाउँमा महिला, बालवालिका, अशक्त र बृद्धवृद्धा मात्र रहेका छन् ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको नारामा मात्र सिमित भएको आभास भएपछि रोजगार खोज्न घरपरिवारलाई त्यागेर भारततर्फ जानुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
गाउँमा स्थानीय सरकार आएको छ स्थानीय तहले गाउँमा रहेका युवाहरुलाई कुनैपनि किसिमको रोजगारको अवसर सृजना नगरेको स्थानीयहरुले आरोप छ । गाउँमा रहेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले जनतालाई सडक निर्माणमा अवसर नदिएर करोडौ रकम खर्च गरेर सडक खन्नका लागि डोजर प्रयोग गरेपछि आफुहरु खाली बस्नु भन्दा रोजगारीका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएको सुर्ज विकले बताएका छन् । मंसिर महिनाको पहिलोहप्ता मात्रै स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नं. १ मुक्तीकोट गाउँबाट झण्डै २ सय बढी युवाहरु जिल्ला बाहिर गएका छन् ।